यो कस्तो गणतन्त्र रहेछ चुनापमा जाँदा प्रतिगमन हुने? | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतवार, जेष्ठ ९, २०७८ मा प्रकाशित
हेर भिरघरे ! राजनीति बुझी नसक्नु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हाम्रो प्रचण्ड काम्रेडले नसकेपछि अरुले सक्ने कुरो भएन । देउवा भित्रभित्र ओलीतिरै मिलेका छन् भन्ने पुष्टी हुँदै छ । अब हामी बिशाल आन्दोलन गर्छौं ।
ठिक भन्यौ काका ! अब कसैले ओलीलाई सक्दैन । पाँच वर्ष काम गर्न देको भा हुने थियो । तिम्रो प्रचण्डलाई उपरतली लागेर १९ पेजको आरोप पत्र लेखिहाले । माधव नेपालको लैलैमा नलागेको भए पालो प्रचण्डकै आम्थ्यो । अब चुनापमा जानुपर्छ । हाम्रो कांग्रेसको बहुमत आम्छ । तिमारु भोट माग्न जान सक्तैनौ, हामी जान्छौ । हाम्रो शेरबहादुर दाइ जिन्दावाद ! दाइ जै नेपाल !
हामी चुनाप हुनै दिदैनौं । हाम्रो माओवादी पार्टी माधव गुट, बाबुराम–उपेन्द्रहर्लाई ओलीको विरोधमा उफ्रिन लगाउन नसक्ने हो भने प्रचण्ड काम्रेडको राजनीति नै समाप्त हुन्छ । तसर्थ हामी कुनै पनि हालतमा चुनाप हुन दिदैनौं ।
काका तिमारु उल्कापात गर्दै गर हाम्रो कांग्रेस चुनाप प्रचारमा लाग्छ । किन भने अबको चुनापमा कांग्रेसले बहुमत ल्याम्छ । तिमार्को पत्तासाफ, हाम्रो फलीफाप ! कि कसो काकी !
हो भतिज ! तिमार्को कांग्रेस फेरि पनि दोस्रो दल बन्छ । हाम्रो एमाले पहिलो दल हुन्छ । माओवादी, माधव गुट र बाबुरामहर्को दिन सकिए । अति गरेपछि खति हुन्छ । ओलीलाई कहिले प्रतिगमनकारी, कहिले षडयन्त्रकारी, कहिले निरंकुश, कहिले के जाती, कहिले उजाती भनेको छ– भनेको छ । लौ के–के भन्नुछ अब भन ! १९ पेजको आरोपत्र फिर्ता लिनुहोस् भन्दा नमान्ने, माधव–झलनाथहरुलाई साथमा लिएर ओलीलाई समाप्त पार्ने, कर्णालीमा जस्तै प्रतिनिधिसभामा पनि गर्ने नभए अनुपस्थित हुने आदि इत्यादि खेल खेलेर हैरान पारेका थिए । अब ढुक्क भयो ।
यो झुम्री बढी बाठी हुन्छे । अब हाम्रो माओवादीमा माधव–झलनाथ, बाबुराम–उपेन्द्र अनि चित्रबहादुर केसीको पार्टी समाहित हुन्छ । त्यसपछि नेपालमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर हामी आम्छौं ।
काका ! पहिला मोहन बैद्य, विप्लव, बाबुराम, बादल, टोपबहादुर, प्रभु साहाहर्को खोजी गर्दा हुन्छ । उनीहरु किन अन्त लागे भन्ने विषयमा पनि निर्मम समीक्षा गर्दा राम्रो ।
आ… भिरघरे ! तिनार्को काम छैन । हाम्रो प्रचण्ड एक्लै काफी । बरु यो कुरा छोड, उता काठमाडौंमा के हुन्छ यसो विश्लेषण गर्न ।
के होला र काका ! अब वकिल र नेताहर्ले मुद्दा माम्लाको भाम्लो सर्वोच्चतिर पु¥याउलान्, माइतीघर मण्डलामा बुद्धिजीविहरु उफ्रिपाफ्री गर्लान, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सराप्लान्, प्रचण्डका पत्रिका र पत्रकारहर्ले मनपरि लेख्लान यस्तै हुन्छ । अरु के हुन्छ र !
हो नि भतिज ! आफ्नो अस्तित्व देखाउन पनि यसो केही त गरी टोपल्नु प¥यो होला । होइन भने ओलीसंग के निहुँ खोजेका ! यिनै माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो ठाउँमा फलानो डिएसपी पठाई दिनु भनेर ओलीले भन्दा ढिस्कानो पठाई दिने, ओलीलाई नौं महिनासम्म मञ्चमा बोल्न प्रतिबन्ध लगाउने, राष्ट्रियस्तरका एउटा पनि काम नगर्ने माधव नै होइनन् । अनि प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा पनि इतिहासमा लेखिने काम नगर्ने, आफ्नो परिवार बाहेक अरुलाई औसर नदिने, खाली पैसाको पछाडि दौडिने गरेका होइनन् ? अहिले किन रुवाबासी गर्नु !
बढी नबोल झुम्री माधव काम्रेडले प्रतिगमन भाग–२ सुरु भएको छ, यसको डटेर सामना गर्नुपर्छ भनेर हिजै लेखी सक्नु भाको छ ।
तिमीले भनेर हुन्छ, पार्टीप्रति गद्दारी गर्र्ने माधव हुन । प्रचण्डको उक्साहटमा लागेर कर्णालीमा एमालेलाई पछारे मपाईत्व छाँट्तै आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएनन्, अस्ति शुक्रबार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नै सांसदको नक्कली हस्ताक्षर बुझाई दिए, हेटौंडामा सूर्यमा भोट नहाल्न फरमान जारी गर्दै आफ्नै पार्टीको उम्मेद्वारा हराए ।, अलि अघि प्रचण्डको लहैलहैमा लागेर आफ्नै अध्यक्षलाई साधारण सदस्य समेत नरहेन गरी हटाए । उनले गर्न सक्ने जति गरेर छाडे । अति पनि ओलीको गल्ती भनेर उनको आफ्नै मुखबाट बोल्न लाज लाग्दैन ?
हो काकी ! ठिक भन्यौं । एकातिर कार्यदलको बैठक अर्कोतिर हाम्रो देउवा दाइलाई बोकेर शीतल निवासको जात्रा ! यस्तो द्वैध चरित्र माधवहरुबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।
तँ जतिसुकै भन भिरघरे ! हाम्रो अन्तिम उद्देश्य ओलीलाई समाप्त पार्ने नै हो । ओली समाप्त हुना साथ हाम्रो प्रचण्डले एमाले कब्जा गर्ने…!
कस्तो कुरो गर्छौ काका ! त्यस्तो सजिलो हुन्छ एमाले कब्जा गर्न ! अब अरु कुरो सकियो । अहिलेको अवस्था प्रचण्ड र माधव मिलेर ल्याएका हुन । अब रोएर केही काम छैन । हाम्रो कांग्रेस खुशी साथ चुनावमा जान्छ । जो ठूलो पार्टी बन्न सक्छ, जनताप्रति विश्वास छ उनीहरु किन चुनाव देखि तर्सिनु ! अर्को कुरा भनत काका, चुनापमा जाँदा प्रतिगमन हुन्छ रे । यो कस्तो गणतन्त्र रहेछ चुनापमा जाँदा प्रतिगमन हुने? चुनाप घोषणा गर्दा गणतन्त्र सखाप हुने ? जनतामा जाँदा प्रतिगमन हुन्छ, गणतन्त्र मासिन्छ भन्नुको अर्थ जनताको निर्णण प्रतिगामी हुन्छ भन्न खोजेको यिनार्ले ?
त्यस्तो होइन नि भिरघरे ! साँच्चै चुनाव भयो भने त हाम्रो हालत के होला ? हामी त समाप्त हुन्छौं । माधवतिरबाट पनि ९÷१० जना मात्रै आउलान जस्तो छ। माधव, झलनाथ, महान राष्ट्रवादी नेता, प्रखर विद्वान डाक्टर भीमबहादुर, झाँक्रीहरु आम्छन् । अरु उतै फर्केलान जस्तो छ ।
आफ्नै घर फर्केको राम्रो ! अहो सात बज्न लागेछ काका । म लागें अब रुवावासी डाँडातिर ।